Thwebula Viber 12.7.5.1 isizulu – Android – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Viber
Amazwana ku Viber
Viber software ehlobene
Isiphequluli ukubukwa okunethezekile amawebhusayithi on the internet. Umsebenzisi ukufinyelela ukucupha ehlukahlukene futhi amamojula ukuqinisekisa umsebenzi izinga isiphequluli.
Ukungqubuzana kwamaqembu – umdlalo wecebo lokuthuthukisa owakho amadolobhana futhi wandise insimu usebenzisa indlela yokuthwebula. Umdlalo usebenzisa ihluzo ezinhle ze-3D nezindlela ezihlukile zokuthuthuka.
I-ES File Explorer – imenenja yefayela elinamandla ukuphatha amafayela akho kanye nezicelo. Isoftware inamathuluzi amaningi okwenza umsebenzi usebenze kahle.